नेप्लेज, ३१ असार । नामै विश्वकप, भनिरहनु पराेइन कि याे विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो । हरेक चार वर्षमा आउने फुटबलको महाकुम्भको २१औं संस्करण रुसमा आज सकिँदैछ । आज राति पौने ९ बजे फ्रान्स र क्रोएशियाबीच फाइनल खेल रुसको…
नेप्लेज, ३१ असार । करिव ९० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म २० संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । जसमा दक्षिण अमेरिकी मुलुकले ९ र युरोपेली मुलुकले ११ पटक विश्वकप जितेका छन् । तपाईंहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि विश्वकप…
नेप्लेज, ३० असार । विश्वकप सुरु हुनुअघि तपाईले फ्रान्स र क्रोएशिया फाइनलमा पुग्ने अनुमान गर्नुभएको थियो ? यदि गर्नुभएको थियो भने अचम्मै हो । मतलव, ‘शानदार’ टोलीलाई छाडेर यी दुई फाइनलमा पुग्छ भनेर कसले सोचेको थियो र ! निश्चित रुपमा…
काठमाडौं, ३० असार । भारतीय चर्चित मोडल पूनम पाण्डे विश्वकप फुटबलको फाईनल खेल नेपाली फ्यानसँगै बसेर हेर्न नेपाल आएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेकी मोडल पाण्डेले आइतबार दरबारमार्गस्थित डेजाभु क्लवमा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल हेर्ने…
विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विश्वकपको फाइनल पुग्नुका लागि कम मेहनतले पुग्दैन । विश्वका सर्वोत्कृष्ट ३२ टिम र त्यसपछि उनीहरुवीचको प्रतिष्पर्धा । त्यही प्रतिष्पर्धाबाट ३० टिमलाई पाखा लगाउँदै निस्किएका दुई टिम फाइनलका…
विश्वकपपछि फिफाबाट कुन क्लवले कति रकम पाउँनेछन ?
विश्वकपमा सहभागि खेलाडी जुन क्लवबाट खेल्छन त्यो क्लवले पनि फिफाबाट केहि रकम पाउने गर्छन । यस्तैमा यसपटकको विश्वकपमा कुन क्लवले कति रकम पाउदैछन त फिफाबाट । रसिया विश्वकपमा सबै भन्दा धेरै ( १६) खेलाडी भएको क्लव हो म्यानचेस्टर सिटी, उसले…
नेप्लेज, २९ असार । विश्वकप फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको क्रोयसियाको त्यो खुसी खेलाडीमा भन्दा पनि देशमा धेरै लागेको छ । समर्थकहरु खुसीमा डुब्नु त छँदैछ देशका मन्त्रीहरूले पनि फुटबलले दिलाएको सफलतालाई विशेष रुपमा मनाएका छन् ।…